के तपाईंको सफ्टवेयरमा साँच्चै कामलाग्दो फिचर छ त ? — Swapnil Acharya
Filed under design thinking opinion product design ux design
के तपाईंको सफ्टवेयरमा साँच्चै कामलाग्दो फिचर छ त ?
Swapnil Acharya • Saturday, July 10 2021 •2minutes read
मैले मेरो बुवाले १९९८/९९ तिर हामी बस्ने घर बनाउन सुरू गर्दाखेरिको कुरा मैले यहाँ जोड्न खोजेँ । त्यतिबेला सिंगो घर एकैपल्ट तयार गरेर नयाँ घरमा सर्ने हाम्रो अवस्था थिएन । त्यसैले बुवाले त्यो घरलाई बस्नयोग्य बनाउन एकदमै आधारभूत कुराहरू हेरेर घरको एमभीपी बनाउनु भएको थियो । हामीले यही “न्यूनतम योग्य उत्पादन” अर्थात् एमभीपी (MVP) सफ्टवेर बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्छौं ।
एउटा सफ्टवेयर बन्नका लागि नभई नहुने कुराहरू के के हुन् ? कुन फिचरहरूबिना हामी बजारमा जानै मिल्दैन तर कुन फिचरहरू चाँही बजार र प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई हेरेर बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हामीले आधुनिक सफ्टवेयरहरू बनाउँछौं । सुरूमै सिंगो सफ्टवेयर एकैपल्ट बनाउन खोज्दा पक्कै पनि बिग्रिन्छ, समय नोक्सान हुन्छ र बनाउनेलाई अनावश्यक दु:ख हुन्छ । रातारात बसेर सफ्टवेयर तयार गर्ने; भरेनै लाईभ जाने प्रवृत्तिका कारण मैले नेपालमा बन्ने अधिकांश सफ्टवेयर कमसल गुणस्तरको भएको पाएको छु । यसमा न डिजाईनरले धेरै समय दिन सक्छन न त डिभेलपर न त क्यूएले ।
त्यसैले होला कतिवटा सफ्टवेयर वा एपमा चाहिने फिचरहरूपनि काम गरिराखेका हुँदैनन् र कतिवटा सफ्टवेयरमा चाहिने नचाहिने फिचरहरू थोपरिएका हुन्छन् । खासमा युजरको आवश्यकता के हो र उनीहरूले के खोजेका हुन् भन्ने कुरा पत्ता नलगाई आफैं मनगणन्ते फिचरहरू बनाएर स्रोत र साधनको नोक्सान गर्ने प्रोजेक्ट टिमहरूलाई पनि म यही संदेशका साथ झकझक्याउन चाहन्छु ।
त्यस्तो भए कुन फिचर चाहिने हो र कुन नचाहिने हो भनेर कसले निर्धारण गर्छ त ?
पक्कै पनि युजरले हो । जसले एप वा सफ्टवेयर चलाउँछ उसको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । एप बनाउने कम्पनीको हाकिमले हैन । यो कुरा बुझौं र युजरहरूसँग कुरा गर्ने गरौं । यसमा युजरहरूसँग कुरा गर्न डिजाईनरको सहयोग लिउँ । युजरको प्रयोग गर्ने तरिका र प्रयोजन बुझ्ने काम डिजाईनरहरूको हो । त्यसैले एमभीपी निर्धारण गर्ने कुरामा डिजाईनरलाई लिड लिन दिउँ । यति गर्न सके हामीले धेरै समय र स्रोत जोगाएर एकदमै चाहिने ठाउँमा मात्रै मेहनत गर्न सक्छौं । यो गर्दा सफ्टवेयरको गुणस्तर बढ्छ । यसको प्रयोग बढ्छ ।
मैले यो भिडियोमा यस्तै कुराहरू गरेको छु । मैले नेपालमा सफ्टवेयर वा एप बनाउँदा खेरि सुरूवाती रिसर्च एकदमै फितलो देखेको छु र आफूलाई लागेको कुराहरू भन्न खोजेको छु । मैले समस्या देखेरै समयमै झकझक्याउन खोजेको हो । यसले पक्कै पनि प्रडक्ट टिमहरू र डिजाईनहरू स्वयंलाई राम्रो जानकारी प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।